China HRC60 Carbide 2 Flute Micro End Mill mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Raisinay an-tanan-droa ny fanampianao ary hanompo ny mpanjifanay na any an-trano sy any ivelany miaraka amin'ny vokatra avo lenta sy serivisy tena tsara mifototra amin'ny fironana amin'ny fampandrosoana bebe kokoa hatrany. Mino izahay fa handray soa amin'ny maha matihanina anay atsy ho atsy.
Safidy malalaka sy fandefasana haingana ho anao! Ny filozofianay: kalitao tsara, serivisy lehibe, manatsara hatrany. Manantena izahay fa hihamaro hatrany ny namana manara-maso hiditra ao amin'ny fianakavianay amin'ny fampandrosoana bebe kokoa amin'ny ho avy!
Mino izahay fa ny fifandraisana tsara amin'ny orinasa dia hitarika amin'ny tombony sy fanatsarana ny roa tonta. Nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy mahomby amin'ny mpanjifa maro izahay amin'ny alàlan'ny fahatokisany ny serivisy namboarina sy ny fahamendrehana amin'ny fanaovana asa aman-draharaha. Ankafizinay koa ny lazanay amin'ny laoniny tsara. Andrasana ny fahombiazana tsara kokoa noho ny fitsipiky ny tsy fivadihana. Ny fahafoizan-tena sy ny faharetana dia hijanona eo mandrakizay.
Teo aloha: 55 HRC Square End mill-4 Flute D4mm
Manaraka: HRC55 Carbide 3 Flute Long Length End Mills ho an'ny Aluminium